Xiaopeng Automobile သည် မျိုးဆက်သစ် အားသွင်း ပုံ ကိုစတင် ခဲ့သည် – Pandaily
Xiaopeng Automobile သည် မျိုးဆက်သစ် အားသွင်း ပုံ ကိုစတင် ခဲ့သည်
Jun 15, 2022, 12:07ညနေ 2022/06/15 14:14:36 Pandaily
အင်္ဂါ နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၉၅ Ron ဓာတ်ဆီ ဈေးနှုန်း မြင့်တက် မှုသည် အွန်လိုင်း ဆွေးနွေး မှုများအပါအ ၀ င် ကျယ်ပြန့်သော အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးမှု များဖြစ်ပေါ် စေသည်Weibo သို့ Xiaopeng Automobile CEO ဖြစ်သူ He Xiaopeng ၏ မှတ် ချက်များသူက EV အသုံးပြု သူများအတွက် အရေးအကြီးဆုံး မှာ မော်တော်ယာဉ် အားသွင်း ခြင်း ၏ထိရောက်မှုနှင့် အဆင်ပြေ မှု ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူက ယခုနှစ် ဒုတိယ နှစ်ဝက် တွင် Xiaopeng သည် မျိုးဆက်သစ် supercharger ကိုစတင် ဖြန့်ချိ မည်ဖြစ်ပြီး စျေးကွက် တွင် တွေ့ ရသော “ supercharger” ထက် ၄ ဆ ပို မြန် ပြီး ကား ဘက်ထရီ ကို ၁၀% မှ ၈၀% အထိ အားသွင်း ရန် ၁၂ မိနစ် သာ ကြာ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် April ပြီလ ၂၆ ရက် အစောပိုင်းက He Xiaopeng က Xiaopeng ၏ စူပါ အားသွင်း စက် များ သည်တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ များတွင် အများဆုံး လည်ပတ် နေပြီး လက်ရှိတွင် ထိုင်ခုံ ၁၆၉ ခုရှိသည်။ Xiaopeng တွင်စုစုပေါင်း အားသွင်း ကွန်ယက် ၉ ၅၄ ခု ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ မြူနီစီပယ် များနှင့် စီရင်စု အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသ များအားလုံးကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။ Xiaopeng တွင် ကိုယ်ပိုင် စူပါ အားသွင်း စက် ၇ ၇၄ ခုရှိသည်။
ဒီလ အစော ပိုင်းမှာXiaopeng သည်ဒုတိယ မျိုးဆက် အိမ်တွင်း အားသွင်း စက် အသစ်ကို ဖြန့်ချိ ခဲ့သည်အားသွင်း ကြိုး မှာ 4G remote control, OTA automatic upgrade စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် များစွာ ကိုထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်။ 7kW နဲ့ 11kW ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ထုတ်လုပ် ပေးထားပါတယ်။ 7kW version installation service pack သည်ယွမ် ၅၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၇ ၄၄) နှင့် 11kW version installation service pack သည်ယွမ် ၇၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၀ ၄၁) ဖြင့် ရောင်းချ သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Huawei နှင့် Xiaopeng အမှုဆောင်အရာရှိ များက လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုအပေါ် သူတို့ ၏အမြင် များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခဲ့သည်
ထုတ်ကုန် နှင့်လိုက်ဖက် ညီ မှုအရ အိမ်သုံး အားသွင်း စက် အသစ် သည်အခြား အသုံးပြု သူများအား ပုဂ္ဂလိက ပုံ ခွဲဝေမှု လုပ်ဆောင်ချက် မှတစ်ဆင့် အိမ်သုံး အားသွင်း လိပ်ခေါင်း များကို မျှဝ ေရန် နှင့်အမျိုးသား စံ AC အင်တာ ဖေ့စ် နှင့် ကိုက်ညီသော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များအားလုံး ကိုထောက်ပံ့ နိုင်သည်။
စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များသည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက် နေပြီး တရုတ် ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် ၏ ဝေစု တိုးပွားလာသည်။ China Information and Technology Institute မှ ထုတ်ပြန်သော မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းအား အချက်အလက်များအရ April ပြီ လတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းအား သည် ၃ ၁၂၀၀၀ နှင့် ၂ ၉၉, ၀၀၀ အသီးသီး ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ၄၃. ၉% နှင့် ၄၄. ၆% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့ပြီး စျေးကွက် ထိုးဖောက် မှုနှုန်းမှာ ၂၅. ၃% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
Xiaopeng Automobile သည် Zvision Technologies တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည်
Beijing Zvision Technologies သည် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန သို့ ပြောင်းလဲမှု မှတ်ပုံ တင်ပြီး ကွမ်ကျိုး နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်Xiaopengမော်တော်ယာဉ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတိုင်ပင်ခံ မိတ်ဖက် (Limited Partnership) ။
Startups Jan 25 ဇန်နဝါရီ 25, 2022
Xiaopeng သည်ဒုတိယ မျိုးဆက် အိမ်တွင်း EV အားသွင်း ပုံ ကိုစတင် ခဲ့သည်
XiaopengMotors က ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ အိမ္ သံုး လွ်ပ္စစ္ ကား အား သြင္း ပံု မ်ားကို ၾကာသပေတး ေန႔တြင္ မိတ္ဆက္ ခဲ့သည္။ ထုတ်ကုန် အသစ်သည် 4G remote control နှင့် OTA automatic upgrade စသည့် လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်များကို ထောက်ပံ့သည်။